Nylon & Polyester Yarn မှထုတ်လုပ်သူ 2006 ခုနှစ်မှစ. | Salud ချည်
ကျနော်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်နှင့်အတူတစ်နိုင်လွန်ကြိုးနဲ့ polyester ကြိုးထုတ်လုပ်သူများမှာနိုင်လွန် FDY,နိုင်လွန် DTY,polyester FDY,polyester DTYအပါအဝင်ဝိုင်ယာကြိုး နှင့်monofilament။
ကျနော်တို့ကြိုးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်တစ်ဦးကြိုးဆေးဆိုးစက်ရုံရှိသည်။ သမားရိုးကျနိုင်လွန်ခြင်းနှင့် polyester ကြိုးထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းအကူအညီဖောက်သည်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လုပ်တဲ့မျှင်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရောင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကြိုးကပိုထိရောက်နှင့်အရည်အသွေး-အာမခံချက်ထုတ်လုပ်အောင်, လိမ်, Hanks, ဆေးဆိုးခြင်းနှင့် Salud ချည်ခင်စက်ရုံအတွက်အကွေ့အကောက်များသောအပါအဝင်မြေတပြင်လုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပေါင်းစပ်။
Polyester Wament Yarn က 150-300d Demingled intermingled
Salud Yarn အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Polyester Tholamament Worky Mondents of Leamed မှထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏အစု၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် (150-300D စက်ရုံ,
Polyester Wamentam Yarn Intermingled Raw White 75-100d
Salud Yarn Intro သည် Polyester Wahnament Yarn White 75-100D Salud Warn မှအသရေဖျက်မှုဖြင့်ဆေးဆိုးဆေးများကိုတည်ဆောက်ခြင်း,
Polyester DID DID THAY TRATIC သည် 150-300D သေဆုံး
Salud Yarn Intro သည် Polyester Dwy Tenacity မှ Intro မှ 140-300D Salud ကြိုး,
Nylon Willament YARN (RAW White) 40-70d
Salud Yarn Intro သည် Nylon Tyament Yylon The White Firament Yyn (White) 40-70D Salud Yarn တို့အားနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အေးဂျင့်ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး,
Nylon Willament Yarn Intermingled (RAW White) 70-300d
Salud နှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်လွန်မြည်ရန်သံမဏိ (ဖြူဖြူ) 70-300d ပေးသွင်းသူ,
ချည်ခင်ဆေးဆိုးဝန်ဆောင်မှု: ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုကြိုးဆေးဆိုးစက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်ဆိုင်တယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးအခြားကြိုးဆေးဆိုးစက်ရုံဆေးဆိုး core ကို-ပတ်ချာလည်ကြိုးအတှကျအသုံးပွုထားတဲ့မှုန်ရေမွှားဆေးဆိုးင့်ကားများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်စသည်တို့ကို, နိုင်လွန်ကြိုးနဲ့ polyester ကဲ့သို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးဆိုးဒြပ်ကြိုးအတှကျအသုံးပွုထားတဲ့ High-အပူချိန်ဆေးဆိုးင့်ကားများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် , သိုးမွှေးချည်, etc
OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု:ကျနော်တို့နိုင်လွန်၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်& လိမ်အပါအဝင် polyester ကြိုးကုန်ထုတ်လုပ်မှု,& texture, Hanks, ဆေးဆိုး (ကြှနျုပျတို့ကြိုးမဆိုအမျိုးအစားဆိုးဆေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်), အကွေ့အကောက်များသောနှင့်ထုပ်ပိုး။ ကျနော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး R ကိုရှိ&သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီကြိုးအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးတိုးတက်လာအောင်ကူညီနိုင်သည့်: D ဌာန။
ချည်ခင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှု:ကျနော်တို့ Dalang မြို့, တရုတ်များ၏ကြိုးစျေးကွက်စင်တာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်, သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အထည်အလိပ်ချည်ဘယ်လိုနေပါစေ, ကျွန်တော်တစ်ဦးပြည့်စုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူသင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Excellent ကပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှု: အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးနောက်-ရောင်းချထမ်းကျနော်တို့အထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၏ပြဿနာများနှင့်အတူသင်ကူညီလိုတဲ့အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးအတွက်အတွေ့အကြုံ 13 နှစ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထူထောင်ခဲ့ကြ100+ ဖောက်သည် မှ30+ နိုင်ငံများ။ ထိုကဲ့သို့သော T / T နဲ့ L / C ကိုအဖြစ်ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကိုမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
တဲတော်, webbing, အားကစားထိုင်ခုံခါးပတ်, ချည်, လေထီး, ကြိုးအထည်, ပေါ်ကိုခါးပတ်, အကျီ, ဖိနပ် Upper, အထည်ချုပ်ဆွဲပြီးချုပ်ပေးရတယ်ကားတစ်စီးထိုင်ခုံခါးပတ်, လောက်လွှဲ, ပိုက်ကွန်ငါးမျှား, အထည် mesh များနှင့်စက်မှု applications များ။
ကြိုးအထည်, ပိုက်ကွန်ငါးမျှား, ကြိုး, filter ကိုပုဆိုး, အိပ်ယာ, ခြင်အသားတင်, ဆိုဖာ, ကုလားကာနှင့်စက်မှု applications များ။
Webbing | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များ
Webbing သည်ကျဉ်းမြောင်းသောအထည်သို့မဟုတ် tubular ထည်အမျိုးမျိုးကိုကုန်ကြမ်းများအဖြစ်ပြုလုပ်သောကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဝတ်အထည်များ, ခရီးဆောင်အိတ်များ, စက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး,
စက်မှုလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများသည်ကြိုးကြိုးများ, ကျော့ကွင်း, လျှံကြိုးများ,0င်ရိုးကြိုး,
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများတွင်မျက်နှာဖုံးများ, ခါးနှင့်ခါးပတ်များ, elastic bandages များ, လည်ပင်းအစောင့်များ,
SOCKS | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စ
ခြေအိတ်များကိုလှေခြေအိတ်များ, တိုတောင်းသောခြေအိတ်များ, ခြေအိတ်များ, ဘောလုံးခြေအိတ်များ, ဘတ်စကတ်ဘောခြေအိတ်များ, မတူညီသောခြေအိတ်များ၏ပစ္စည်းနှင့်သဘောသဘာဝသည်အတူတူမတူကြပါ,
Salud ချည်ခင်တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်နိုင်လွန်ကြိုးနဲ့ polyester ကြိုးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစက်ရုံကြိုးစမ်းသပ်သည့်ကိရိယာနဲ့ R, အဆင့်မြင့်ချည်ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ 2006 ခုနှစ်တွင် Huizhou တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်&: D ဌာန။ 2008 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုစက်ရုံကဆက်ပြောသည်နှင့်လည်း polyester ကြိုးထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ 2010 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ Dongguan တရုတ်အတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားအရောင်းဌာနတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ 2021 ခုနှစ်, ကုမ္ပဏီဒြပ်ကြိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ကို (နိုင်လွန်ကြိုး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်& polyester ကြိုး) နေရာက1000 တန်ချိန် / လအတူခိုင်မာသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း100+ ဖောက်သည် အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရာမှ30+ နိုင်ငံများ တိုင်းတစ်ခုတည်းတစ်နှစ်။
စက်ရုံစျေး Now ကိုရယူပါ!
အခမဲ့နမူနာ || ချည်ခင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ဆောင်မှု || ပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ဖြည့်စွက် || လိမ္မော်ရောင်&OEM ဝန်ဆောင်မှု || ချည်ခင်ဆေးဆိုးဝန်ဆောင်မှု